Windows 11: Qamba igama kwakhona "Le PC"
ikhaya/11 Windows/Windows 11: Qamba igama kwakhona “Le PC”
Vangelis3. Julayi 2021
Ukuya kuthi ga kwiWindows 8 igama kwi-Explorer yayingu "Khompyutha yam". Emva kokuyitshintsha Microsoft kwi "Le PC". Eli ikwaligama loMhloli kwi Windows 11. Ungalinika igama kwakhona igama njengoko unqwenela ngomzamo omncinci kakhulu.
Ukuba unayo iWindows 11 Windows Explorer qala kwaye ucofe ku "Le PC", zonke iidrives ziya kudweliswa.
Ngaphezulu, ukufikelela ngokukhawuleza kuboniswa kwicala lasekhohlo kunye nezinye iifolda ezininzi. Apha unokujonga ngokukhawuleza iifolda ezisetyenziswa rhoqo kunye neefayile ezisandula ukuvulwa ngaphandle kokukhangela kwiifolda ezininzi. Unokucofa iifolda zakho ozithandayo kwaye uzifikelele ngokukhawuleza ukuze uhlale uzisebenzisa kwangoko.
Phinda Unike Igama "Le PC"
Ukufumana ileyibhile "Le PC" phantsi 11 Windows Ukuthiya ngokutsha yenza oku kulandelayo. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokwenza oku.
Kungcono ukuqala iWindows Explorer ngokudibanisa isitshixo "IWindows + E".
Cofa ekunene "Le PC". Unga F2 Sebenzisa iqhosha kwakhona.
Faka igama olifunayo uze ucofe iqhosha lokungena.
Ukuba unayo "Le PC" indlela emfutshane kwidesktop, unokuyiqamba kwakhona yonke into apho. Ukwenza oku, cofa ekunene kwaye ukhethe "Qamba ngokutsha".
Windows 11: Lungelelanisa ibar yomsebenzi ngasekhohlo kwakhona
Phucula ukusebenza kweWindows 11 - vumela ukukhawuleziswa kwehardware
Guqula inkqubo esemgangathweni yePDF kwiWindows 11
emsebenzini Le pc 11 Windows